Hambalyo Sanad Guurada 120aad ee Guusha ADWA. - Cakaara News
Hambalyo Sanad Guurada 120aad ee Guusha ADWA.
Jigjiga(Cakaaranews) talaado, 1da march, 2016, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa guud ahaanba shacab waynaha itoobiya ugu hanbalyeeyay sanad guurada 120 aad ee guusha ADWA oo maalinta barito ah laga xusayo guud ahaanba dalkeena itoobiya taasi oo ah xiligii bulshada itoobiya oo isku duubani ka guulaysatay guumaystihii talyaaniga uu doonayay in uu dalkeena itoobiya xoog ku guumaysto.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in ay tahay maalin qaaliya oo ay xusitaankeedu ku wayntahay dhamaanba qoomiyadaha iyo shucuubta itoobiya ahna maalintii geesiyada xaq u dirirka ahayd ay ka guulaysteen guumaystihii talyaaniga oo xiligaasi guumaysan jiray qaarka mid ah wadamada qaarada Africa. kana mid ahaa wadamada ugu awooda badan aduunka xiligaasi Guushaasina tahay mid ku timiday midnimada, geesinimada muwaadiniinta itoobiya oo isku duuban ay kaga hortageen guumays tihii talyaaniga.
ugu danbayntii madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa fariin u diray bulshadasho wayngta itoobiya taasi oo odhanaysa “wada jirkii, midnimadii iyo isku duubnaantii aynu kaga guulaysanay guumays tihii talyaaniga waa in aan kaga guulaysano cadaw geena koowaad ee maanta oo ah saboolnimada”